Gladeholm, Stenshuvud - Cider Orchard / artstudios - I-Airbnb
Gladeholm, Stenshuvud - Cider Orchard / artstudios
Kivik, Skåne län, Sweden
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJohan
IGladeholm ikwindawo ekhuthazayo kwiihektare ezili-11 zomhlaba weefama kumda weStenshuvud National Park ngaphandle kweKivik, eSweden. Ifama inesatifikethi se-ecologic (KRAV) kunye negadi yeziqhamo ubukhulu becala kunye nama-apile. Isitiya sebhotani se-9500 Sqrmeters singqonge esi siseti sefama saseMzantsi Sweden. Yindawo yomlingo apho iiKites zityibilika kancinane ukuze zigqume amasimi angqonge iinduli. Igama elithi Gladeholm "likhaya leeKites" (iMilvus Milvus).
Indlu yethu yeendwendwe iqhele ukusetyenziselwa ukubhala, ukutyelela amagcisa kunye neeprojekthi zamaxwebhu kwaye ekuqaleni yayiyindawo ye studio. Sisakhiwo sanamhlanje ukusukela ngo-2001 sigcwele ukufudumeza phantsi kunye nekhitshi langoku kunye negumbi lokuhlambela.
4.72 out of 5 stars from 169 reviews
4.72 · Izimvo eziyi-169
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi169
Ifama iphezulu kwincam yeStenshuvud Nationalpark emangalisayo, umzantsi mpuma weSkåne inkangeleko yonganyelwe yimbonakalo entle yomhlaba kwaye kudala itsala amagcisa kunye nabahlali benkcubeko. Sijikeleze iKivik inani elikhulu leegalari ezintle kakhulu kunye neeresityu, kwaye ngeenyanga zasehlotyeni sibamba iminyhadala emininzi kunye neendibano zobugcisa.
Malunga neStenshuvud National Park
Ipaki yeSizwe yaseStenshuvud yasekwa ngo-1986 kwaye imi kumazantsi-mpuma wephondo laseSkåne.
Kudala lo mmandla uchaphazeleka kukudlisa amadlelo kunye nokulima. Iziduli zamatye ezifunjwe ukuze kucocwe umhlaba, iingcingo zamatye kunye neentsalela zamandulo kuloo ndawo zinikela ubungqina kubukho babantu kunye nefuthe labo emaphandleni.
Ipaki yesizwe ithatha iihektare ezingama-400, kuquka iihektare ezingama-80 zolwandle. Intaba yaseStenshuvud ngokwayo ineencopho ezintathu. Eyasentla, ephakame kangangeemitha ezingama-97 ngaphezu komphakamo wolwandle, ngowona uphakamileyo. Ubukhulu becala, lo mmandla ugqunywe lihlathi, ihornbeam ilolona hlobo lubalaseleyo lomthi. Imithi emidala eneecanopi ezibanzi, efana ne-beech kunye ne-oki, isala ukususela ngexesha lokutyiswa kwakuloo ndawo. Namhlanje imfuyo edlayo ibuyele kwipaki yesizwe, igcina amaphandle evulekile.
Iibhayotopes ezininzi ezahlukeneyo kwipaki yesizwe zinegalelo kwiintlobo ngeentlobo zezityalo nezilwanyana. Apha uya kufumana amadlelo anesanti, amadlelo amanzi, unxweme olunamatye kunye neelwandle ezintle ezinesanti. Ezantsi kwentaba kwicala elingasentshona, kukho i-bog kunye ne-alder marsh. Ipaki yesizwe ineentyantyambo ezininzi kunye neentlobo ezithile ezinqabileyo ezifana ne-barren strawberry, i-spleenwort emnyama, i-sand pink, i-pasqueflower kunye ne-immortelle.
Umbuki zindwendwe ngu- Johan
Ujoyine nge- 2018 Julayi
Singabantu basekhaya kwi-Österlen ngolwazi olubanzi lwemisebenzi kwindawo. Zive ukhululekile ukubuza nantoni na, ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka singalungisa namalungiselelo.
Indawo yaseStenshuvud / Kivik yeyona ndawo iphambili kwimisebenzi ejikeleze i-Österlen, sinokukukhokela kwimisebenzi emininzi enokuba nomdla.
Iilwimi: English, Svenska
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kivik